सकारात्मक ‘सोच’नै अहिलेको आवश्यकता हो – Nepal Japan
नेपाली समय : 04:52:43
जापानी समय : 08:07:43
सकारात्मक ‘सोच’नै अहिलेको आवश्यकता हो
11 September, 2017 18:37 | बिचार | comments | 226050 Views
प्रसङ्ग एनआरएनए जापानको निर्बाचन पछिको माहोलको हो । यही महिनाको तिन-तारिकमा अनलाइन भोटिंग प्रकियाबाट निर्बाचन गराईएको थियो ।
पछिल्लो जनगणना अनुसार जापानमा करिब सत्तरी हजार नेपालीहरु बसोबास गर्दै आएका छन । यस पटक एनआरएनए जापानले सकेसम्म धेरै भन्दा धेरै जापानबासी नेपालीहरुको सहभागिता हुने आशाका साथ सिस्टमेटिक तबरले सदस्यता नबिकरण गर्न सकिने गरि मोबाइलफोन एप्लीकेसन पनि बनाएको थियो । जसले गर्दा झोलामा सदस्यता नबिकरण फारम बोकेर हिडने युगको अन्त्य भएको थियो ।
यो एनआरएनए जापानले आजसम्मको ईतिहासमा गरेको एउटा राम्रो चुनौती पनि थियो । बिभिन्न समाचारका माध्यमहरुबाट तत्कालिन अध्यक्ष सुदन थापाले मोबाइलफोन एप्लीकेसन डाउनलोड गर्ने तरिका , सदस्यता लिने र नबिकरण गर्ने तरिकाको बारेमा ब्याख्या पनि गरेका थिए ।
उनीले गरेको प्रयास प्रशंसनीय छ , त्यसमा कुनै दुबिदा नै छैन तर बिडम्बना करिब दश हजार तिन सय सत्तरी जापानबासी नेपालीहरुले मात्र एनआरएनए जापानको सदस्यता नबिकरण गरेका छन । सत्तरी हजार भन्दा बढी बसोबास गर्ने ठाउमा जम्मा दस हज़ारले सदस्यता लिनुमा के कस्ता कारण छन , सबैले यसको आबस्यकता ठाने या ठानेनन , बिस्बास गरे या गरेनन , राजनितिक रङ्ग मिसिएको सस्था भनी जान चाहे या चाहेनन , यस बिषय गम्भीर छ । अहिले त्यता तिर पनि नजाऔ । यसको बारेमा छुट्टै लेखको आबस्यकता छ ।
त्यसै गरि सदस्यता नबिकरणको र नया बन्ने प्रक्रिया बैधानिक थियो या थिएन , यसको बारेमा छुट्टै छलफलको आबस्यकता छ । हुनुपर्ने चाही प्रत्येक जापानबासी नेपालीहरुले आफ्नै बिचारले , सोचले , कसैको अनुरोध र कसैको दबाबमा नआईकन आफ्नो सदस्यता नबिकरण गर्नुपर्ने , नया सदस्यता लिनु पर्ने थियो । तर यहाँ उमेदबारहरुको अनुरोधमा , सबै फारम उमेदबारहरुले भरिदिएको पनि पाईएको छ । त्यसका कारण साधारण सदस्यहरुले आफु सदस्य भएको खबर देखी लिएर , सदस्यता कार्ड लिन जानु पर्ने खबर , आफ्नो आईडि र पासबर्ड सुरक्षित राख्नु पर्ने या पासबर्ड बदल्नु पर्ने खबरमा कुनै चासो नलिएको हुनु पर्छ । यस्ता कुराहरुबाट अरुले फ़ारम भरिदिने प्रणालीको पनि अन्त्य गर्नुपर्ने देखिएको छ । सदस्य संख्या कम भएर के भयो र , ईच्छुक ब्यक्तीलाई मात्र सदस्य बनाउदा पनि ठिकै होला हैन र ।
यस पटकको निर्बाचन अगाबै ,यस्ता कुराहरु उमेदबारहरुले पनि आफ्ना सहयोगीहरुलाई बेला बेलामा अबगत गराउनु पर्ने थियो । त्यस्ता काम केही नभई चुनाब दिन पनि आईहाल्यो । बिहान दश बजेर बिस मिनेट बाट सुरु भई करिब छ बजेर बिस मिनेट अनलाइन-भोटिंग भयो । यस अनलाइन-भोटिंग प्रणालीले तुरुन्तै नतिजा पनि आईहाल्यो ।
त्यस पछि बिजयी हुने उमेदबार र पराजित हुने उमेदबारबाट बिभिन्न प्रकारका मत बिभेद आइरहेका थिए भलै हिजो आइतबार सबै बिजेताले सपथ लिईसकेका छन । मेरो ब्यक्तीगत बिचारले के भन्छ भन्दा खेरी एनआरएनए जापानले गर्ने कामहरु सिमित छन , धेरै आशा पनि गर्नु हुदैन । आशा गर्नु नै ग़लत हो , आफ्नो पसिना र परिश्रममा मात्र आश गरौ भन्छु म त ।
अहिले एनआरएनए जापानको निर्बाचनमा जित हुने , पराजित हुने उमेदबारहरु बिच मन-मुटाब भए पनि यो केही समयको लागी मात्र हो । यो बिदेशको ठाउमा भोली फेरी त्यही दाई भाई दिदि-बहिनी संग काम गर्नु पर्छ । एनआरएनए जापानको निर्बाचनमा जित हासिल गर्नु भएका उमेदबारहरु पनि नमात्तिकन अगाडी बढन जरुरी छ, भोली त्यही साथी भाई दिदि बहिनी संग मिलेर अगाडी जानु पर्छ । आखा अगाडीको कुरा मात्र सोचेर केही हुदैन ,भबिष्यको लागि पनि सोचेर बर्षौं-बर्ष पछिका कुराहरु पनि सोच्नु जरुरी छ ।
सकारात्मक सोच राखौं अनि मात्र हाम्रो एनआरएन, राम्रो एनआरएन, सुसंगठित एनआरएन र सभ्य एनआरएन भन्ने दिन आउलान |
यो पनि पढ्नुहोस : परिवर्तन सम्भव छ- सुरु आफूबाटै गरौं
वैवाहिक अंङ्गिकृत नागरिकतासम्बन्धी विवाद र विश्वव्यापी मान्यता
नेपाली युवाहरुको वास्तविकता- “भ्रम, विभाजन र हिन मनोभावना”
कानुनभन्दा माथी कोही छैन र कोही हुनु पनि हुँदैन
जापानमा देख्न नसकिएको भविष्य र अपनाउन नसकिएको यथार्थ
मेरो छोरा ! तिमीले मैले जस्तै सपना पूरा गर्न परदेशिनु नपरोस् !!
“विद्यासुन्दरलाई भेटेपछि बैरागिएको म” !
समृद्ध नेपालको खाका नेताका दौराको फेर समातेर मौका खोज्नेहरुबाट कोरिंदैन
सन्दर्भ गुरुपूर्णिमा : शिक्षण घर चलाउने पेशा हैन- युग बदल्ने अभियान हो !